Dalladda SAFE oo sheegtey in aysan Aqoonsaneyn Natiijada Imtixaanka Dowladda - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dalladda SAFE oo sheegtey in aysan Aqoonsaneyn Natiijada Imtixaanka Dowladda
July 28, 2018 admin1126
Waxaa Xafiskiisa Shir Jaraa’id ku qabtey Agaasimaha Fulinta ee Dallada Waxbarashada ee SAFE Mudane Kayse Mayow Abo Xuseen ,waxaana uu Shirkiisa Jaraa’id uu ku saabsanaa Natiijadii Imtixaanaadkii ay Dowladda Federaalka ay ka qaadey Ardeydii dhameysatey Dugsiyada Sare ee Dalka sannadka 2017-2018.
Mudane Keyse waxaa uu sheegey in Hay’adda SAFE ay Cabasho weyn ka tahay qaabkii loo qaadey Imtixaanaadka iyo qaabkii Weliba loo saxay Imtixaanaadkaas waxaana uu sheegey in Hay’adda Waxbarashada ee SAFE in Wasaarada Waxbarashada aaney wax la tashi ah kala sameeyn Habkii loo saxay Imtixaanaadkaas waxaa uu intaa uu sii raaciyey.
“Muddo Dhowr Sanno ah ayaa soo diyaarineyney Ardeydaas sidaa darteed Wasaarada Waxbarashada Wax Xil ah ama Masuuliyad ah kama muujin Habkii loo qaadey iyo habkii loo saxay Imtixaanaadkaas waxaa uu yiri Agaasimaha “Ardeyda imtixaankooda la saxay cida mas’uuka ka ah waa anaga, mar hadii doorkeenna ay diideen Dhibaatada iyo Cadaaladdarada ardayda soo gaartay waxay noqonaysaa mid ku talagal ah”.
Agaasimuhu wuxuu intaa ku daray “Hay’adda SAFE oo hooyadii waxbarashada ahayd Ayaan Wasaaradda la wadaagin ama aysan ka talagalin sixida Imtixaanaadka maadaama aynu nahay Marjicii Waxbarashada” Wuxuu intaa ku darey
Agaasimaha Fulinta Hayadda Waxbarashada SAFE waxaa uu sheegey In Natiijadii Imtixaanaadka ee Wasaaradda qaadey Sannadkaan aysan Hay’adoodu Aqoonsaneyn waayo buu yiri Imtixaanaadkaas wado cadaalad ah looma marin.
Ugu Dambeyn Agaasimaha waxaa uu sheegey in ay la yaab tahay in 5 kun oo ardey Imtixaankaas lagu rido , isagoo sheegey in taas ay ku tusineyso sida agaasimaha wasaaradda uu ugu dhaga adeegay doorkeennii Mas’uuliyadeed ee sixida imtixaanka sidaa Darteed waa Nasiib daro ah in ardey Tiradaa la eg oo muddo dheer wax la soo barayey in si cadaaladdaro ah loo niyad jabiyo Ciddii sameyseyna qaadaysa cawaaqibta ka dhalata, isla markaana mar uuna lagula Xisaabtami doono.
Sannadkaan waxaa Imtixaanaadkii Dugsiyada Sare u fariistey in ka badan 25 ku oo ardey, waxaa Gudbey 20 ku oo ardey halka ay dhaceen in ka badan 5 kun oo ardey sidaa darteed Waalidiin fara badan ayaa sannadkan aad uga cowdey qaabkii loo saxay Imtiaanaadkii Dowladda kuwaa Cabashaooda u gudbiyey Daladaha Waxbarashada dalka
Wariye Hoygiisa lagala baxay gobolka Sh/Hoose